Sida loo sameeyo shaleemo: waxa ay tahay iyo qaar ka mid ah qalabka ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
sida loo sameeyo shaleemo
Warshadaha filimaanta ayaa si sii kordheysa baahida ay u qabaan isticmaalayaasha isticmaala maalin kasta. Haddii aan si qoto dheer u sii wadno qaybtan, waxaan ku soo gabagabeyneynaa in ay jiraan farsamooyin iyo saameyno badan oo u suurtagashay in ay soo jiitaan tiro aan xadidneyn oo daawadayaal ah.
Taasi waa sababta Qoraalkan, waxaan kuugu nimid inaan kaala hadalno shaleemada, Hubaal waxaad la yaaban tahay waxa farsamadani tahay iyo sida aan u fulin karno oo aan ula qabsan karno mashaariicdayada.
Hagaag, ka hor intaadan u gudbin casharka mini, waxaanu dooneynaa inaan kuu sharaxno waxa ay ku saabsan tahay iyo waxa sirta ah ee ay ku qarisay gacanta hoosteeda fiidiyowyo ama dhibco badan.
1.1.1 Bogagga internetka
1.1.2 shabakadaha bulshada
2 Sida loo sameeyo shaleemo
3 fanaaniinta shineemooyinka
3.1 Jamie Beck iyo Kevin Burg
3.2 Reed + Rader
3.3 Koby Inc.
4 Qalabka naqshadaynta shaleemada
shaleemooyinka, waa sawiro taxane ah oo is dhammaystiraya ama ku midoobay ujeeddada samaynta muuqaal. Jaleecada hore waxay u ekaan kartaa wax aan macquul ahayn oo run ah, laakiin waa mid ka mid ah farsamooyinka loo isticmaalo wax kasta oo ka sarreeya abuurista GIFS. Wixii aad si fiican u fahanto, waa muuqaal gebi ahaanba taagan, laakiin marka loo qaybiyo laba ama saddex qaybood waxaan ka helaynaa meelo kala duwan oo dhaqdhaqaaq ama dhaqdhaqaaq ah.
Waa farsamo hal abuur leh, maadaama aan dooran karno aagga sawirka aan rabno inaan ku dhaqno waxaanan xor u nahay inaan naqshadeyno animations kuwaas oo leh muuqaal iyo dabeecad gaar ah. Cinemagraph-yadu waxay fuliyaan hawlo kala duwan, laakiin mid ka mid ah ayaa shaki la'aan ah in uu soo jiito dareenka daawadayaasha iyada oo loo marayo animation.
Waxay la xiriiri kartaa ama waxay yeelan kartaa astaamo la mid ah waxa aan u naqaanno waqti go'an, oo kaliya maahan, waxaan ka heli karnaa warbaahinta internetka ee kala duwan sida shabakadaha bulshada ama warbaahinta xayeysiiska ee kala duwan, maadaama ay yihiin qaabab wanaagsan iyo doorashooyin wanaagsan oo kor loogu qaado ama kor loogu qaado badeecad gaar ah..
Marka la soo koobo, waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii waxa aad rabto ay tahay inaad midayso walxaha garaafka sida sawirada, oo aad ku darto animation mid kasta oo iyaga ka mid ah. Sidoo kale, dhamaadka boostada, waxaanu kaa tagi doonaa qaar ka mid ah qalabka ugu fiican ee aad ku abuuri karto kuwaaga gaarka ah iyo kuwa gaarka ah.
Waxaa jira tusaalooyin badan oo muuqda oo shaleemografi ah, marka waxaa laga yaabaa inaad mid aragtay oo aanad garanayn. badan oo ka mid ahs waxay ku jiraan bogag shabakadeed oo kala duwan ama qaabab kala duwan oo nuxur ah iyo qaabab aan naqaano. Liiskan yar waxa aanu ku tusinaynaa halka aad ka heli karto qaar ka mid ah:
Haddii aan tagno bog kasta oo gifs ah oo jira, waxaan ku soo gabagabeyn doonaa in ay jiraan shaneemogaraafiyo badan oo loo qaabeeyey loona abuuray in la soo dejiyo oo loo isticmaalo mashaariic kala duwan. Si ka duwan GIF-yada, waxay aad uga qurux badan yihiin, sidaa darteed waxay si fiican ugu habboon yihiin warbaahinta xayeysiiska.
Shabakadaha bulshada sida Facebook ama Instagram, haddii aan shaleemo u isticmaalno hasgta, boqol ka mid ah ayaa gacantayaga ku jiri doona oo aan ku yeelan karno tixraac si aan u abuurno annaga.
Marka la soo koobo, haddii aad si qoto dheer u dhex gasho shabakadaha bulshada waxaad ogaan doontaa inay jiraan fanaaniin badan oo u heellan inay qaabeeyaan qaababka sida shaleemada. Isticmaalayaal badan oo badan ayaa u dooranaya farsamooyinkan bogaggooda internetka.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo abuuro shaleemo, Waxaan dooran karnaa barnaamijyada animation sida Premiere ama si fudud Adobe Photoshop, haa, markaad akhriyayso. Photoshop waxay leedahay qayb firfircoon oo is dhexgal ah, halkaas oo aad ka bilaabi karto naqshadaynta shaleemadaada ugu horreysa. Laakiin si aan u bilowno, waa in aan si cad u qeexnaa tillaabooyinka soo socda:
Kahor intaadan isticmaalin sawirka, waa lagama maarmaan in la duubo clip-ka taas oo aan rabno in aan ku darno animation ahaan, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in aan gacanta ku hayno kamarad iyo tripod. Tripod-ka ayaa kaa caawin doona inaad dhaqdhaqaaqa ka dhigto mid aad u wanaagsan oo dhibatooyinku ma soo baxayaan inta lagu jiro habka duubista.
Marka aan muuqaalka diyaarsano, waxaan u baahan doonaa inaan bilowno arjiga Photoshop-ka oo aan galno clip-ka. Xaaladdan oo kale, waxaad isticmaali kartaa codsi kasta oo kale oo la shaqeeya qaababkan, waxaan ku talinaynaa Photoshop in la bilaabo. Marka aan dhejinno clip-ka, kaliya waa inaan dooranaa qaybta aan rabno inaan ku dhaqno.
Meelaha si buuxda u taagan, waxaanu ka saari doonaa iyaga oo leh ikhtiyaarka dalagga iyo maaskaro lakabka ah. Haddii ay dhacdo Photoshop, aan dooranno qalab kale, geeddi-socodku aad ayuu uga fudud yahay, maadaama ay ku filnaan lahayd oo keliya in lagu hago meelaha aan rabno inaan ku nooleyno iyo kuwa aan sameynin.
Marka aan tan samayno, waa in aan si sax ah u dhoofinnaa. Sida caadiga ah, waxaa lagu talinayaa ku dhoofi qaab GIF ah.
Jamie Beck iyo Kevin Burg
Xigasho: Diary Expedition
Labaduba waa farshaxaneyaal shaleemo waxaana sidoo kale loo arkaa wakiillo sare. Shaqooyinkiisa waxaa lagu dejiyay safarka ama qaab nololeedka caanka ah ee sawirka. Dareenkiisa iyo xirfadiisa ayaa ka dhigay qaar ka mid ah shaqadiisa inay soo jiitaan dareenka macaamiil badan oo caan ah iyo wakiilo ka socda adduunka moodada. Shaki la'aan, shaqadoodu aad bay u guulaysataa waxayna u adeegi kartaa dhiirigelin weyn.
Farshaxannadan waxaa lagu gartaa inay hagayaan filimada firfircoon iyo abuurista GIFS. Mawduuca ugu muhiimsan ee shaqadiisu waxay dib ugu noqotaa adduunka mustaqbalka iyo mustaqbalka. Mid kasta oo GIFskiisa ah, waxay isticmaalaan asal monochrome ah oo inta badan cad. Waxa lagu gartaa shuqulladiisa ayaa ah in curiyayaasha ka dhex muuqda ay inta badan yihiin moodooyin ku dheesha garaaca oo isu roga. Maxaa ka cadhaysiiya daawadaha saameyn muuqaal ah oo dhaqdhaqaaq iyo firfircooni ah oo soo jiidata dareenka badan ee kuwa arka. Marka la soo koobo, waa fanaaniinta ugu habboon.
Haddii aad rabto inaad abuurto animations madadaalo leh taabasho kaftan ah oo aad ka fogaato halista iyo demure, waxaad tahay nasiib. Koby Inc, waa farshaxan u heellan adduunka animation, gaar ahaan haddii ay ku biiraan qiiq iyo qosol. Farshaxankan ayaa ka soo shaqeeyay qaybo badan, isagoo ka bilaabay moodada iyo xayaysiinta.
Waa farshaxanka ugu habboon dhammaan shaqooyinkaas meesha aad rabto inaad ku ciyaarto kaftan iyo naqshad laakiin iyada oo aan aad uga fogayn xirfadlaha oo si sax ah loo habeeyey. Marka la soo koobo, waxaad fiirin kartaa shaqadiisa waxaadna ogaan doontaa waxa aan ka hadlayno.
Qalabka naqshadaynta shaleemada
Photoshop waa mid ka mid ah aaladaha Adobe, in kasta oo sannadahan oo dhan ujeeddadeedu ahayd tafatirka iyo dib-u-habaynta sawirrada, waxay sidoo kale leedahay dhinaceeda is-dhexgalka meesha aad ka ciyaari karto oo aad abuuri karto animations-kaaga ugu horreeya. Shaki la'aan waa waxa aad raadinayso si aad u bilowdo naqshadaynta shineemagarafyadaada ugu horeeya, maadaama ay ka kooban tahay liis balaadhan oo qalab ah oo lagu hagaajinayo mashaariicdaada. Sidoo kale, ma aha oo kaliya inaad iyaga abuuri karto, laakiin waxaad sidoo kale codsan kartaa filtarrada animation-ka, labadaba diiran iyo qabow, iyo habkan ayaa ka dhigaya mid aad u xiiso badan.
Flapix waa qalab kale oo u eg Photoshop, sababtoo ah waxa ku jira qayb animation ah oo sahlaysa samaynta filimada. Codsigan waxaa loogu talagalay in uu kuu fududeeyo in aad mashruuc ku naqshadeyso farsamadan, sababtuna tahay jiritaanka filtarrada filimada oo aad soo dejisan karto oo aad isticmaali karto.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale haysataa suurtogalnimada inaad ku darto badhamada isdhexgalka ee shaqooyinka oo aad dib u habeyn ku sameyso, taas oo u oggolaan doonta daawadayaasha inuu la kulmo dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Marka la soo koobo, waa shaki la'aan qalabka aad u baahan tahay si aad u bilowdo naqshadeynta, iyada oo ay ugu wacan tahay interface-ka fudud.
Zoetropiz waa inuu ahaadaa barnaamij sixir halkii uu ka ahaan lahaa naqshadaynta animation. Aaladdan waxaad ku naqshadayn kartaa shaleemograafiyadaada ugu horreeya adiga oo sawiradaada u beddelaya muuqaallo firfircoon hal gujin oo kaliya. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale ku siinaysaa qalabka lagama maarmaanka ah si aad u bilowdo naqshadeynta.
U oggolow dhinacaaga hal-abuurka leh inuu tago, oo bilow inaad tijaabiso qalabkan. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya qalab kasta, maadaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo goobta animation iyo image. Zoetropiz, waxaad haysataa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad dhoofiso mashaariicdaada marka ay dhammeeyaan.
Pixel Motion waa qalabkeenii ugu dambeeyay ee liiska. Mana aha sababtoo ah waa kan ugu dambeeya waa kan ugu xun, laakiin waa ka soo horjeedaan. Qalabkan waxaad ku naqshadayn kartaa animations aan dhammaadka lahayn, oo ay ku jiraan shaleemooyinka. Buug-gacmeedkeeda ballaadhan ee saamaynta ayaa ka dhigaya mashaariicdaada kuwo aad u xiiso badan. Intaa waxaa dheer, ma adag tahay in la isticmaalo, maadaama ay interface waa mid aad u ballaaran oo ay fududahay in la dhex maraan.
Marka la soo koobo, Pixel Motion waxaad ku naqshadayn kartaa wax kasta oo aad rabto oo aad soo jiidan karto animationsaga nolosha, kaliya waa inaad noqotaa mid hal abuur leh oo aad u habayn karto sidaad jeceshahay. Waa qalabka ugu fiican.
Shaneemagaraafka waa farsamo soo jirtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Si aad u badan oo ay jiraan farshaxanno badan oo, mahadnaqa shaqadooda, shabakado badan oo telefishin ah ayaa doortay inay isticmaalaan animation-yadooda sida goobo yar yar oo xayeysiis ah.
Mawduuca ku saabsan waa uun muuqaal muuqaal ah ayaa aad uga sii fogaaday, si uu u awoodo inuu ka gudbo shaashadda oo uu gaaro warshadaha moodada. Hadda waa markii aad bilaabi lahayd naqshadaynta shaleemadaada ugu horreysa. Xusuusnow inaad isticmaali karto qaar ka mid ah qalabka aan soo jeedinnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » sida loo sameeyo shaleemo
Maxay shabakadaha bulshadu muhiim ugu yihiin Suuqgeynta Gudaha?
Waa maxay walxaha ka kooban naqshadeynta boodhka Jabbaan?